Joanne Rowling (JK): Muenzaniso wekuvandudza uye nesimba. | Zvazvino Zvinyorwa
Ana Lena Rivera Munoz | | Vanyori
JK Rowling: Iyo yakaoma kemisitiri yekubudirira.
Joanne achidzungaira ndomumwe wevanyori vane mukurumbira pasi rese: Mabhuku ake esaga re Harry Potter Iwo anoverengwa nevana kwete kudaro vana pasi rese, uye kutengesa kwake, kodzero dzekushandisa mafirimu uye kutengesa, zvakamutungamira kuti ave mumwe wevanyori vakapfuma kwazvo pasirese.
Forbes akamutumidza zita rekuti pmunhu wekutanga kuwana $ 1000 bhiriyoni kubva pakunyora mabhuku.
1 Joanne Rowling paudiki:
3 Harry Potter inozopedzisira yaburitswa!
4 Joanne Rowling nhasi:
Joanne Rowling paudiki:
Harry Potter mukomana wenherera ane masimba emashiripiti, anotizira kunyikadzimu kutiza hupenyu hwakaipa hwaakapihwa nasekuru vake, vaanogara navo. Joanne Rowling aigarawo kwake gehena panguva iyoyo yehupenyu hwake, asi kwete kumba, asi kuchikoro: mudzidzisi akaita kuti hupenyu hwake husakwanise, Mai Morgan mumwe wevanhu vakaipa kwazvo muHarry Potter, purofesa Severus Snape.
Pazera rematanhatu akanyora nyaya yake yekutanga, kunyangwe kuda kwake mabhuku kuchikwira mudanho rake rekuyaruka, mainini vake vakamupa kopi yekare yebhuku Jessica mitford: Mukukudzwa kwake akatumidza mwanasikana wake wekutanga kuti Jessica.
Akadzidza philology yechiFrench, aishanda muPorto semudzidzisi weChirungu uye ipapo akaroora Jorge Arantes, mutori wenhau wechiPutukezi uyo aiva nemwanasikana.
Joanne akabva kuPortugal apo mwanasikana wake aive nemwedzi mishoma kubva pa kudhakwa nekusabatwa zvakanaka kwemurume wake.
Yakaendeswa kuscotland nemwanasikana wake, kupi akatambura nekliniki yekuora mwoyo y akasvika pakufunga kuzviuraya. Iyo nhanho yehupenyu hwake yakamupa pfungwa ye Dementors, zvisikwa zvisina mweya.
Vasina basa uye kurarama nemari yenyika, Rowling yapera rake rekutanga kunyora kunyora mumakamuri akasiyana siyana.
Diagon Alley: Iyo Wizarding Nyika uko JK Rowling anosunungura yake yehudiki kushungurudzika kuburikidza naHarry Potter.
Harry Potter inozopedzisira yaburitswa!
Yakarambwa nevaparidzi, bhuku rake rekutanga rakaburitswa nekuda kwaAlice Newton, mwanasikana ane makore masere wemutungamiri weBloomsbury imba yekuburitsa. Chinyorwa chakawira mumawoko emusikana netsaona uye baba vake vakabvuma kuchitsikisa kuti vasamuodza moyo. Chikamu chekutanga chakaburitswa muna 1997 nekutenderera kwemakopi chiuru chete.
Rowling aive nemunyori block kesken Goblet reMoto y Harry Porter uye iyo Order yePenieni Kumanikidzwa nekubudirira kwake uye kuburitswa pachena munharaunda, kunyangwe aine hunhu. "Ndakapera nguva kana simba pandakasvika kumagumo," akadaro achireva Harry Potter uye iyo Order yePenieni.
Joanne Rowling nhasi:
Mushure mekutambudzika kwakapfuura saamai vasina murume, ikozvino Sachigaro chesangano rinobatsira mhuri dzine mubereki mumwe: Gingerbread.
Iye munhu anonyara, ane godo nekuvanzika kwake kunaani zvakaoma kwaari kuti atakure mukurumbira uye hupenyu hweveruzhinji.
Iyo Harry Potter akateedzana rakashandurwa mumitauro makumi manomwe nemana.
Is akaroora anesthetist Neil Murray, kubvira 2001, uye vane vana vaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » JK Rowling: Muenzaniso wekukunda